Qaramada Midoobe Oo Walaac Xoogan Ka Muujisay Weerarada Ay Fuliyaan Mujaahidiinta Dalka Maali. – Calamada.com
Qaramada Midoobe Oo Walaac Xoogan Ka Muujisay Weerarada Ay Fuliyaan Mujaahidiinta Dalka Maali.
calamada April 21, 2018 2 min read
War rasmi ah oo kasoo baxaya Ergayga Q.Midoobe uqaabilsan wadanka Maali ninka lagu magacaabo Max’med Saalax Al-nadiif ayuu ku sheegay in weerarada ay fulinayaan jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ay wiiqeen dhammaan dadaalladii ay ku doonayeen in waxa loogu yeero Dimuquraadiyadda ay ku gaarsiiyaan dhammaan gobollada Maali.
isagoo wareysi siinayay wakaalad wareed laga leeyahay wadanka Ruushka ayuu ku sheegay in bilihii lasoo dhaafay ay sare ukadeen weerarada Mujaahidiinta arrinkaas oo uu sheegay in ay halis weyn ku yihiin doorashooyin ku sheegyada lafilayo in laqabto bisha 6-aad ee sanadkaan.
Mas’uulkan u hadlay waxa loogu yeero Q.Midoobe wuxuu walaaca ugu xooggan ka muujiyay weerarada mujaahidiinta oo markii ugu horraysay gaaray Bartamaha iyo Koonfurta Maali kanasoo gudbay waqooyiga wadankaas oo aheyd meesha ugu daran ee uu ka socday siraaca Maali shantii sanadood ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale wuxuu carabaabay in cabsidu aysan ku ekeyn Maali oo kaliya balse wadamada Burkiin Faaso iyo Neyjar oo Daris la ah ay ka sheeganayaan weerarada uga imaanaya mujaahidiinta jamaacada ugargaaridda islaamka iyo Muslimiinta.
Mar uu soo hadal qaaday ciidamada ka socda Isbaheysiga Dowladaha Saaxilka ee loo yaqaan G5 ee Maali lageeyay ayuu sheegay in aysan wax weyn kusoo kordhin dhanka ammaanka ayna wajahayaan caqabadihii ay lakulmeen ciidamada ka socda waxa loogu yeero Q.Midoobe iyo kuwa dowladda saliibiyadda Faransiiska.
Ninkan dabadhilifka ah ee lagu magacaabo Max’med Saalax alnadiif ayaa horay Urur gaaleedka Midowga Afrika uqaabilsan Soomaaliya isagoo sidaan oo kale uga walwali jiray weerarada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaaddo gaalada Afrikaanta ah ee duullaanka shareeca ladirirka ah kusoo qaadday Soomaaliya.
Warkan Calaacalka ah ee kasoo yeeray gaalada Qaramada Midoobe ayaa kusoo aadaya xilli Mujaahidiinta Jamaacada U Hiilinta Islaamka iyo Muslimiinta ay sheegteen Mas’uuliyadda weeraro culus oo lala beegsaday garoonka diyaaradaha Magaalada Timbokta oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidamada gaalada ee duulaanka Shareeco la dirirka ah ku qaaday dalka Maali,weerarkaasi oo khasaara culus oo isugu jirta naf iyo maal lagu gaarsiiyay gaaladaasi Faransiiska ugu horeeya.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 05-08-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 6-08-1439 Hijri.